Arakaraka ny mpanjifa filàna, fotsy, lasitike sy porous scaffolds azo omena na inona na inona endrika (varingarina, kapila, goba, sns) sy ny lafiny.
Arakaraka ny mpanjifa filàna, fotsy, lasitike sy porous scaffolds azo omena na inona na inona endrika (varingarina, kapila, goba, sns) sy ny lafiny. Ny mifampitohitohy masonkoditra lehibe ao amin'ny scaffolds manamora ny fitaterana ny otrikaina, mamela ny sela mba mampiditra, Miely patrana sy manavaka in in vitro sy ny Vivo fampianarana.
Mason-koditra haben'ny azo samihafa ao amin'ny isan-karazany ny 100-1000 micrometers; Porosity: ≥ 90%
Ity vokatra dia vokatra namboarina. Afaka manolotra andiana Porous Scaffolds araka ny fangatahana.
Previous: Silk Fibroin vahaolana
Nateraka indray Silk Fibroin Porous Scaffold
Nateraka indray Silk Fibroin proteinina Porous Scaffold
nateraka indray Silk proteinina Porous Scaffold
Silk Fibroin proteinina Porous Scaffold
Landy proteinina Porous Scaffold